Acmaasha Xajka oo ka bilaabatay Sacuudiga & tirada Soomaalida xajiday oo la shaaciyey (Sawirro) – Xeernews24
Acmaasha Xajka oo ka bilaabatay Sacuudiga & tirada Soomaalida xajiday oo la shaaciyey (Sawirro)
19. August 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Malaayiin qof oo xujey ah ayaa maanta waxay si rasmi ah uga bilaabeen acmaasha xajka magaalooyinka barakeysan ee dalka sacuudiga.
Xajka oo ka mid ah tiirasha diinta Islaamka ayaa waxa sannad walba daafaha caalamka ka soo xajiya muslimiin badan kuwaasoo gaadha magaalooyinka Makka iyo Madiina.
Soomaali badan ayaana waxay ka mid yihiin muslimiinta tirada badan ee sannadkan xajinaya kuwaasoo lagu qiyaasay 22 kun, waxayna yimaadeen 45 dal sida ay sheegeen masuuliyiinta sacuudiga.
Dhinaca kale waxaa culeys xoog leh la saaray adkeynta amniga Xujeyda Muslimiinta ah ee ka qeybqaadanaya Xajka
Waxyaabaha Sannadkan Xajka ku cusub waxaa ka mid ah in tirada dadka Xujeyda ay aad uga badan yihiin sidii hore, waxayna gaadhayaan ilaa 3 Milyan oo qof, waxaa intaas dheer In la ballaadhiyay Waddooyinka iyo meelaha muhiimka u ah Xajka isla markaana xadhigga laga jaray afar bilood ka hor Xajka.
Ciidamo ka badan 100,000 kun oo Askari ayaa loo xilsaaray xaqiijinta amniga iyo habsami u socodka Xujeyda Muslimiinta ee Maka iyo Madiina iyo meelaha kale ee muhiimka u ah gudashada acmaasha Xajka.
Waxaa intaas dheer in Ciidanka cirka ee Sucuudiga ay heegan sare ku jiraan iyaga oo ka feejigan in Xuutiyiinta Dalka Yemen ay Sawaariikh la beegsadaan Xujeyda iyaga oo ka eegaya colaadda kala dhaxeysa boqortooyada Sucuudiga.
Waxa kale oo sannadkan Xajka ka cusub kuleylka oo la sheegayo in uu marayo heerkii ugu sarreeyay muddo 35 Sanno ah, taasoo iyana qeyb ka ah dhibaatooyinka sannadkan ka jira Xajka, iyadoo laga cabsi qabo isbuurasho ama cidhiidhi sababi kara dhimashada dad badan siddi horayba marar badan u dhacday.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/08/SAUDI-RELIGION-ISLAM-HAJJ.jpg 576 1024 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-19 10:24:412018-08-19 10:24:41Acmaasha Xajka oo ka bilaabatay Sacuudiga & tirada Soomaalida xajiday oo la shaaciyey (Sawirro)
Maamulka DDSI: Guddoomiyaha Baarlamaanka, Wasiiro iyo Masuuliyiin kale oo la... KACDONKA BARBAARTA SITTI GUUSHII DHALATAY INAY GAAGIXIN